नागरिकको दैनिकी र सार्वजनिक सेवा| Nepal Pati
हामी कुरा गर्दा उन्नत मुलुकको उन्नत प्रणालीको निकै महत्त्व र उदाहरण दिएर नै गर्ने गर्छौ । तर सेवा प्रवाह गर्ने बेलामा आफू परियो भने सेवामा त ढिलासुस्ती गर्छौ नै । व्यवहार पनि निकै रूखो र दरिद्र देखाउदै प्रणाली विहिन मुलुकको लथालिङ्ग हुनेगरि नै गर्छौ । त्यो गरिरहदा सेवाका विषयमा चसक्क कुरा उठायो भने सेवा नै अवरुद्ध गरेर महिनौंसम्म अल्मल्याउछौ । अनि गफ दिनु पर्यो भने हरेक वाक्यमा समृद्धि शब्द जोडिदिन्छौ ।
सर्वसाधारण नागरिकको जीवनसगँ जोडिएका सार्वजनिक सेवाभित्रका टेलिफोन, खानेपानी तथा ढल निकास, फोहोर, शिक्षा , स्वास्थ्य, यातायात र सुरक्षा जस्ता सेवा अवरुद्ध हुँदा नागरिकको दैनिक जीवनमा कति असर पर्दछ ? भन्ने कुरामा सम्बन्धित निकायले खासै चासो र सरोकार नै राख्दैन । अवरुद्ध हुने कुराको सुचना दिनु पर्दछ, सेवालाई नागरिक या सर्वसाधारणको हितानुकुल जतिसक्दो छिटो सञ्चालन गर्नु पर्दछ भन्ने सोच पनि सेवाप्रदायी सरोकारवाला संघ/संस्थामा भए जस्तो लाग्दैन । हिजो मात्रै एक महिला सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा भन्दै थिइन- ” महिनौं देखि धारामा पानी नआएर टेन्सन भयो ।” संगै बसेका अर्को यात्रुले स्वर थपिहाले – “मेरो टोलमा विना सुचना टेलिफोन अवरुद्ध भएको महिना नाघ्यो । उजुरी मात्रै सय पटक आउने गरे होला ।” मेरो मनमा पनि झस्का पस्यो । मेरो टोलको ढल अवरूद्द भएको दुई साता नाघ्यो । उजुरी हैन हजुरी पनि गरिसकें तर बनेन् । टेलिफोन र विद्युतिय तारको भद्रगोल कस्ले मिलाउने ? सरकारी बैंकका शाखा छिर्दा काउन्टर मान्छे भेट्न महिनौं कुर्नुपर्छ । स्कुलको फि र गृहकार्यले बच्चा स्कुल जानै खोज्दैनन् । बिरामी भएर अस्पताल गयो भने अस्पतालकै चिनेको मान्छे भएन भने बिरामी अझै बढ्ला कि भनेर डराउनु पर्ने । यस्ता विषयमा सरोकार राखेर नागरिकको हित अनुकलमा काम गर्ने उपभोक्तहरूका संस्थाहरू पनि खासै उपभोक्त अधिकारका लागि हैन, कहिँ कतै सहयोग पाइहाले गरिहालौं न त भनेर लागेका या यसो अनुगमनको नाम जोडेर प्रविधिबाट बेला बेला सर्वजानिक रूपमा देखिन पाए खुसि हुने सोचमा मात्रै जोडिएका हुन कि ? यसरी देखिए पछि कुनै बेला राजनीतिक रङ्ग भित्र छिरेर कुनै पद बहाली गर्न पाइन्छ कि भन्ने स्वार्थ पनि प्रशस्तै देखिन्छ ।
यस्ता विषयले व्यक्तिको दैनिकमा कति असर पर्छ ? कार्यलयको काममा कसरी असर पर्छ ? घरपरिवार र समाजमा साथै बालबालिकाहरूलाई हामीले के सिकाइ रहेका हुन्छौ ? जीवन र दैनिकीसगैं सेवाहरू कसरी सरल बनाउने भन्ने विषयहरू कस्ले सोच्ने ? माथि उठाइएका अव्यवस्थित सार्वजनिक सेवाहरूलाई कस्ले र कहिले व्यवस्थापन गर्ने ? यस्ता संस्थाहरूको कामको संयोजन कुन मन्त्रालयले गर्ने आदि कुराको सम्बोधनमा होस पुगे सर्वसाधारणमा पर्न गएको क्षतिका बारेमा अब सोच्ने कि नसोच्ने ? नागरिक समाजको पनि चासोको विषय होला कि !
यस्ता सुचना नागरिकलाई बेलैमा दिनुपर्छ नत्र नागरिकहरू मात्रै हैन राज्यको काममा पनि क्षति हुन्छ । त्यो क्षति हेर्दा नजानिदो भए पनि वर्षौंसम्म रहिरहदा मुलुकको उत्पादनमा कति घाटा पर्ला त ? त्यस्तै मानिस तनावग्रस्त हुदाँ राज्य या संघ संस्थाले पाउने सेवामा त घाटा हुन्छ नै तर त्यो भन्दा बढी तनावको कारण नागरिकको स्वास्थ्य नै बिग्रन्छ भन्ने कुराको बोध हुन अब हामीलाई कति वर्ष लाग्ने होला ? साथै यस्ता कुराले मुलुकको विकासको स्तर र नागरिक जीवनको समृद्धि साथैसगँ कसरी जोड्न सकिएला ? भनेर कस्ले सोच्ने ? त्यस्ता कुराहरू बोध गर्ने या मापन कसरी गर्ने ? यी र यस्ता विषय पनि त समृद्धि भित्र छलफल हुनु पर्ने होला नि ! होइन भन्ने कसरी थाहा पाउने ?
सार्वजनिक सेवा भन्नासाथ शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी, ढल निकास, विद्युत, सडक, यातायात, सुचना तथा सञ्चार लगायतका धेरै सेवाहरू पर्ने गर्दछन । यी र यस्ता सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरूले नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका हुन्छन । यी विषयहरू नभए मानिसको दैनिक जीवन नै अस्तव्यस्त हुने गर्दछ । यति महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि हामी लापरवाही गरिरहेका छौ र हुन्छौं । विकसित मुलुकहरूमा यी सेवाहरू प्रवाह गरिरहँदा राज्य तथा सम्बन्धित सेवा दिने संस्थाहरू राज्यसँग भन्दा बढी नागरिकसँग उत्तरदायी भएको देखिन्छ । त्यसैले होला दैनिक सेवा तालिकामा हेरफेर आएमा या कुनै समस्या परेमा नागरिकहरूलाई तुरुन्तै सार्वजनिक सुचना मार्फत जानकारी गराइन्छ । सुचना जानकारी गराउने मात्रै होइन विकल्पमा दिइने निकासका बारेमा पनि ध्यान दिनु अनिवार्य छ । साथै अस्थायी सेवा मार्फत तुरुन्तै सेवा पनि प्रदान गरिन्छ । सेवा प्रवाहमा ढिलाई हुने देखिएमा क्षमा माग्दै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिन्छ । यस्तो सुचना र सचेतताले नागरिकको जीवन र दैनिकमा कुनै प्रकारको असुविधा हुदैन या नपरोस् भन्ने मनसायले गुजारातिर लागिन्छ ।